Torohevitra lehibe momba ny toeram-ponenana ho an'ny fanandramanao amin'ny fetiben'ny Mozika
Zavakanto & Kolontsaina Music
Raha mandeha mankany amin'ny fetiben'ny mozika na lohataona ianao amin'ny voalohany, dia ho azonao ny fiaramanidinao, satria ny toerana dia ny làlana tena nalaza indrindra sy azo vidiana mba hijanonana amin'ny hetsika toy izany. Na vaovao ianao na dia tsy nitoby tao amin'ny fetibe iray taloha, dia misy zavatra maro azonao atao, izay hanampy anao hahatsara kokoa ny toeram-ponenanao.
Na izany na tsy izany, tsy misy olona te-hanahy ny amin'ny fananganana lay ny lay eo amin'ny toerany rehefa afaka manao fety ianao ary mahita ny tarika tiany indrindra.
Manaova fanatanjahantena alohan'ny hahatongavanao
Ny fametrahana trano lay ao amin'ny hazavana mandringa amin'ny andro izay samborinao voalohany dia tsy ny zavatra tianao hatao, ka ny iray amin'ireo zavatra manan-danja indrindra hatao mba hiomanana amin'ny fetibe dia ny manao ny fananganana ny lay alohan'ny handehananao mankany amin'ilay hetsika. Miezaha hahatsiaro raha misy takelaka samihafa ho an'ny faritra samihafa ao amin'ny tranolay, ary tsarovy ny fikarakarana ny tranolay, toy izay te hivoaka haingana amin'ny alahady hariva na alatsinainy maraina rehefa miala.
Mitondrà saina na marika ho an'ny tranonao
Alao sary an-tsaina ny fiezahana hitady tranolay iray ao amin'ny tanin-janak'andro amin'ny alina miaraka amin'ny hazavana kely fotsiny, ary izany rehetra izany dia mbola ratsy kokoa noho ny akanjo fisotroana iray na roa alohan'ny hariva.
Ny sainam-pirenena na ny marika dia fomba iray ahafahanao mahita ny lalana hiverenanao any amin'ny tranolainao, fa raha tsy manana ny tenanao ianao, mitadiava tranolay hafa miaraka amin'ny marika manokana sy ny tasy eo akaikiny, mba hanampy anao hiverina any amin'ny tranolainao .
Mividy tranolay lehibe kokoa noho izay ilainao
Na izany aza dia maro ireo olona izay miaraka aminao, mividy tranolay izay lehibe kokoa noho ilay ilainao, satria olona roa ao amin'ny tranolay roa no hahita fa ny toerana ao amin'io tranolay io dia ho tena Premium, ary misy tranolay lehibe kokoa be lavitra kokoa.
Izany dia hanome anao toerana hivezivezy sy hitahiry ny akanjo, zava-pisotro ary fitaovana hafa hitazonana ny toerana ao amin'ny toeram-ponenanao.
Mifidy ny toerana ho an'ny tranolainao
Ny fanalahidin'ny toeram-pialan-tsasatra tsara dia ny handehandeha eny amin'ny toeram-pisakafoanana sy tilikambo fiarovana, nefa tsy ho tena akaiky anao fa hanana olona mandeha amin'ny alina. Mba hahitana ny toerana tsara indrindra, dia miezaha hampiseho haingana araka izay tratra, ary hitady toerana iray izay vitsy miala ny lalana ary tsy misy eo akaikin'izany.
Mitondrà rano be
Ny faran'ny herinandro amin'ny fisakafoanana sy ny fisotroana dia hampiditra ny vatany amin'ny vatanao, ka hahatonga anao hahazo rano sy rano be miaraka aminao dia hanampy anao hiantoka fa afaka hamono ny hetaheta ianao rehefa mifoha maraina be.
Mijery ny zava-tsoa ao amin'ny tranolay
Ny tanjona tsara indrindra dia ny hitondra zavatra sarobidy araka izay azo atao aminao, ary tsy handray na inona na inona izay tsy ho azonao hamoy ny ainy, fa rehefa mitranga ny entana miaraka aminao, ataovy azo antoka fa afeninao ao anaty tranolay. Aza avela hisy zava-tsarobidy ao anaty paosin-kitapo na eo akaikin'ny varavarana mankany amin'ny tranolay, fa afeno ao anatiny kely fotsiny.
Miomana amin'ny orana
Raha tsy mankalaza fetin'ny ririnina tahaka ny Burning Man ianao, dia misy fotoana tsy maintsy hodianao ny orana, mba ho azo antoka fa tsy misy rano ny tranonao, ary mitondra marika tsara ho anao ianao.
Na dia eo aza ny fakam-panahy dia esory daholo ny akanjo lava mialohan'ny hidiranao ao anaty tranolainao, ary manamboara fantson-damosina mivonona alohan'ny hidirana ao anaty kitapo matory.
Manaova namana miaraka amin'ny sakafo maraina!
Ny kitapo fivoahana tsotra sy fitaovana fototra vitsivitsy dia hanampy anao hametraka anao ho anisan'ny olona malaza indrindra eo amin'ny toeram-ponenana, ary mofo kely na sausage sandwich no vato fehizoron'ny sakafo maraina nentim-paharazana.
Toerana fanatanjahantena Long Island
Ireo fotoana 10 mahatsiaro mahatsikaiky indrindra amin'ny tantara Coachella
Iza no milalao mandritra ny Summer concerts? Mankalazà an'i Brooklyn!
Ahoana no hiomanana amin'ny karnavalo elektrônika?
Inona no tsy maintsy iankinan'ny aina alohan'ny fitsidihanao?
Trano fandraisam-bahiny any Amerika Afovoany, ampahany 1
Ireo zavatra faran 'ny farany hatao any afovoan-tanàna Milwaukee
6 Fitaovam-pitondrantena Swedish
Ahoana no hahazoan-tsarimihetsika vidin'ny Caribbean sy Airfares
Wheel Four Pop-up Camper: Hawk (na Kestrel) Modely
Torohevitra momba ny fialantsasatra ireo Theme Parks miaraka amin'ny zafikely
Sukau ao Sabah, Malezia
Peyto Lake, Alberta: Torolalana iray feno
15 Fihetseham-po mahatsikaiky momba ny maso Londres
Maka BART Train avy amin'ny SFO mankany Downtown San Francisco
Ny fomba fianarana any ivelany afaka manampy anao hahita ny nofinao Joba